Ismaamulka Diridhaba Iyo Munaasabada Xuska 20aad Ee XDSHSI - Cakaara News
Ismaamulka Diridhaba Iyo Munaasabada Xuska 20aad Ee XDSHSI
Diridhaba(cakaaranews)Talaado, 13ka March 2018.Waxaa xarunta ismaamulka Diridhaba ee magaalada Diridhaba kaqabsoontay munaasabad si heersare ah loo soo agaasimay islamarkaana lagu xusayay sanad-guurada toban-tobnaad ee 20 jirsatay ee kasoo wareegtay aas-aaskii XDSHSI.
Hadaba Munaasabadan oo ay kasooqaybgaleen taageerayaasha XDSHSI ee kudhaqan magaalada diridhaba iyo waliba qaar kamid ah masuuliyiinta xarunta dhaxe ee XDSHSI. waxaana furitaankeedii ugu horayn kahadlay Madaxa Arrimha Siyaasada Xarunta Dhaxe Ee XDSHSI Mudane Cumar Maxamuud Cabdi oo sheegay in munaasabadani kusoo aaday xili horumar balaadhan uu kutalaabsaday xisbigu. wuxuuna intaa kudaray in xuskan halkudhag looga dhigay ‘’Geeedisocodka Xisbigeena Ee Kusalaysan Aragtida Shacabku Waa Aasaaska Midnimada Iyo Dibucurashadeena’’ sidookale masuulka oo hadalkiisa sii wata ayaa si wayn uga warbixiyay sooyaalka taariikheed ee XDSHSI isagoo ugu horayn kahadlay dhibaatooyinkii iyo hagardaamooyinkii loo gaystay shacabka deegaanka ee uu sida arxandarada ah ugu gaystay kaligii taliskii dhargiga. Wuxuuna tilmaamay in xisbigu uu guulo wax ku ool ah ka keenay waxqabaka adeegayada horumarineed iyo kuwa kaabayaasha dhaqeele islamarkaana uu wakhtixaadirkan kuguda jiro sidii looga guulaysan lahaa cadawga 1aad ee deegaanku leeyahay ee ah saboolnimada.
Dhankakale, munaasabada ayaa waxaa isna kahadlay Maayorka Ismaamulka Diridhaba Mudane Ibraahim Cismaan oo sheegay in xisbigu uu marwalba utaaganyahay kajaawaabida baahida shacabka. Wuxuuna si qoto dheer uga hadlay waxqabadka XDSHSI iyo waliba taageeraha shacabka bulshada oo timid kadib markii xisbugu layimid waxqabadkudayasho mudan
Sidookale, munaasabada ayaa waxaa isna kahadlay Madaxa Arrimaha XDSHSI Ee Ismamulka Diridhaba Mudane Suubane Cabdi Axmed oo sheegay in munaasabadani ay tahay sanadguurada toban-tobnaad ee 20jirsatay ee kasoowareegtay aasaaskii XDSHSI. Wuxuuna masuulku kawarbixiyay waxqabadka XDSHSI laantiisa diridhabe ee kuaadan dhinacyada horumarka nabadgalyada iyo maamulka suuban.
Iskusoowada duuboo, munaasabada ayaa intii ay socotay waxaa bulshada heeso madodaala ah usoo bandhigay kooxaha deegaanka iyo waliba kooxaha ismaamulka diridhaba kadibna masuuliyiinta xisbiga ayaa si wada jir ah ugu shamac shiday munaasabada iyadoo halkaasna lagu jaray toortihii munaasabada.